Waxaan dib u soo ceshano karaa Safari Bookmarks tirtiray on iPhone?
Cidna ma oga sida ay u soo ceshano Bookmarks Safari inaan tirtiro on my iPhone? Waxaan dhawaan la tirtiro folder Bookmarks ah ka iPhone in qoran badan, Bookmarks badan. Ma suroobi karaa waddo si ay u soo kabsadaan, ama waxaan ahay la soo deristey tan iyo markii aan ma lahayn file ah oo gurmad abuuray? Thanks.
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka kuu ogolaanayaa inaad u samaysid si fudud oo saddex kaliya qasabno. Halkaan Eeg hoos ku qoran.
Kabsado Bookmarks tirtiray ka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Kabsado Bookmarks tirtiray ay si toos ah aad ka baareyso iPhone.
Waraaqda hayaan Lugood / iCloud dib u soo ceshano Bookmarks aad iPhone.
IPhone sokow, sidoo kale taageertaa oo dhan iPad iyo iPod taaban 5/4.
The version maxkamad free kuu ogolaanaysaa inaad ku eegaan dhammaan xogta recoverable ka hor soo kabashada.
iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS; macruufka 9/8/7/6 taageeray
Sidee inuu ka soo kabsado Bookmarks iPhone
Next, aynu rakibi Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer iyo u isticmaalaan si ay u soo kabsadaan Bookmarks iPhone in tallaabooyinka wada. Haddii aad tahay qof user Mac ah, waxa kale oo aad qaadi kartaa talaabooyin la mid ah sida soo socota.
Tallaabada 1. Daahfurka barnaamijka
Xiriirka aad iPhone in kombiyuutarka, abuurtaan barnaamijka iyo waxaad heli doontaa interface sida soo socota. Waxaa jira laba hababka soo kabashada aad ikhtiyaar: kabsado Device macruufka iyo soo kabsado Lugood ee kaabta File. Dooro mid ka mid hore iyo dhaqaaqo tallaabada xigta.
Tani waa uu furmo suuqa u isticmaala isticmaalaya iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 5 ama iPhone 4s:
Tani waa uu furmo suuqa u isticmaala isticmaalaya iPhone 4 iyo iPhone 3GS: Waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo ka siib-in ee halkan.
Fiiro gaar ah: Si aad u soo kabsado aad gurmad Lugood, doortaan kabsado Lugood ee kaabta File doorasho dusheeda.
Tallaabada 2. Scan Bookmarks badiyay aad iPhone
Haddii aad tahay qof an iPhone 6S Plus / 6S / 6 Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4s user, aad si toos ah u riixi kartaa Start Scan ku furmo suuqa ugu weyn ee baarista iPhone xogta ku yaal.
Haddii aad isticmaalayso iPhone 4 / 3GS, waxaad u baahan tahay in la raaco tallaabooyinka hoose si aad u hesho hab iskaanka qalabka ka hor inta aadan soo kabsado tirtiray Bookmarks ka iPhone:
Hay iPhone oo guji Start.
Markaas si degdeg ah wax miiran Home iyo badhamada Power ee saxda ah 10 ilbiriqsi.
Ka dib markii in, waxaa laguu sheegi doonaa in aad si guul leh ku soo gashay hab. Software wuxuu ku bilaabmaa aad ka baareyso iPhone xogta laga badiyay.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha & kabsado Bookmarks iPhone
Scan ka dib, dhammaan xogta aad laga badiyay iyo xogta hadda ku iPhone waxaa laga heli doonaa oo soo bandhigay qaybaha cad. Si aad u hubiso Bookmarks aad, dooro category ee Safari Bookmark and ku eegaan mid ka mid ah content ka mid. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto oo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad soo kabsado Bookmarks iPhone ay soo saarida gurmad Lugood, waxaad bedelan kartaa in hab kabashada oo ka mid ah ka soo kabsado Lugood ee kaabta File on sare ee suuqa kala in tallaabada ugu horraysa. Markaas dooran gurmad ah ee aad iPhone oo soo saaro. Tallaabooyinka soo socda la mid yihiin kuwa kor ku xusan. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo eegista soo kabsado wax kasta oo aad rabto in aad ka natiijada scan.
> Resource > Ladnaansho iPhone Data > iPhone Bookmark Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Bookmarks on iPhone